Isixhobo sokucoca ngesepha esingachukumisi kurhwebo
Ikhaya / Ukuhlamba igumbi lokuhlambela / Izipompo zeBlue Bath / WOWOW Isepha yokuhambisa ngaphandle kokuchukumisa
I-WowOW Disapenser Disapenser yoRhwebo
Isisongeli sensor sensor esenzekelayo inakho ngokuzenzekelayo kwaye ihlambe ngaphandle kokuhlamba izandla xa ihlamba izandla, kwaye isebenzise ulwelo lwesepha ukucoca izandla ngaphandle kokuchukumisa, okulunge kakhulu kwaye kucocekile.
Isicoci sesepha esingachukumisi
Ngenxa yokuqhambuka kwezifo, njengokuqhamka kwe-COVID-19 umzekelo, siyaqonda ukuba impilo yethu ibuthathaka kwaye kufuneka sihlale silunakekela ucoceko lwethu ukuze singosuleleki. Kwaye ukungosuleleki ezinye. Ingakumbi kwiindawo zikawonke-wonke, kufuneka sazi ngokupheleleyo malunga nococeko, kwaye izixhobo mazibonelelwe ukukhusela intsholongwane okanye iintsholongwane ukuba ingasasazeki. Izinto ezinokuthi zichukunywe rhoqo, njengee-dorknobs kunye neefestile, kufuneka zihlale zicocwa ukuze zingabikho ntsholongwane. Kwaye ngexesha le-pandemics kuya kufuneka ngaphezulu kokuphephe ukuxhawula izandla. Kodwa ngaphezulu kwako konke, kubaluleke kakhulu ukuhlamba izandla zakho rhoqo. Xa uhlamba izandla rhoqo, iibacteria zineenguqu ezincinci zokusasazeka nokwenza umntu ogule okanye wosulelwe yintsholongwane.
Ku-WOWOW siyikhathalele impilo kwaye zonke iimveliso zethu zihlala ziyilelwe impilo yakho njenjongo. Kungenxa yoko le nto siyile le disenser engenakuthintelwa yesepha yokukunika intuthuzelo epheleleyo kunye neendlela zabasebenzi bakho kunye nabathengi, kunye nendlela ekhuselekileyo yokunqanda intsholongwane kunye neebhaktiriya ukuba zingasasazeki.
Isicoci sesepha esingachukumisi nge sensor-red sensor
Kwiindawo zikawonkewonke ungathanda ukuthintela ukubamba nantoni na ngezandla zakho ukunqanda ukudibana neentsholongwane. Kungenxa yoko le nto iWOWOW ibonelela ngesixhobo esingachukumisi sesepha ngetekhnoloji ebomvu ye-infra-red. Xa ubamba izandla zakho phantsi kwesicoci sesepha esingachukumisi, uyakufumana isahlulo sesepha ezandleni, ngaphandle kokuchukumisa nantoni na. Ngokudibanisa nephedi engachukumisi, unokuhlamba izandla zakho ngokukhuselekileyo, ngaphandle kokwenza naliphi na iqhinga elinzima ukunqanda ukuphatha nantoni na.
Indawo yokucoca isepha engafumanekiyo inokusetyenziswa kwiindawo ezahlukeneyo, njengeethoyilethi okanye ekhitshini, umzekelo, izakhiwo zeofisi, izibhedlele, iibhanki, iindawo ezinkulu zentengiso nakwezinye iindawo ezininzi. Esi sisitya sokucoca ngesepha singachukumisi senziwa ngezinto eziphezulu zokusebenza ukuze zihlale ixesha elide kwiindawo zikawonkewonke. Nokuba nokusetyenziswa kanzima kwesandla sokucoca isepha yokusasaza kunokuphathwa ngokulula. Ngaphandle kwento iinkampani ezininzi zamazwe aphesheya ziye zathembela kwisicoci sesepha esingashukumiyo seWOWOW ukulawula ukugqabhuka kwe-COVID-19.
Izinto ezininzi zokucoca isepha zokucoca ezingasebenzi
Ngokuyintloko le nto yokucoca isepha engenziwayo yayenzelwe isepha. Kodwa unokusebenzisa naluphi na uhlobo lwwelo kule diser sensor diser sensor. Ungayigcwalisela ngesibulala-ntsholongwane, ngesicoci seelitha, ngento engamanzi yokuhlamba okanye okanye ngeglasi yelanga. Unokuhambisa izixhobo zokucoca iisepha ezimbini ezingachukumisi, umzekelo, ngesepha yesandla kunye nenye enesibulala-ntsholongwane. Kule nto unika intuthuzelo ephezulu kubathengi bakho kunye nabasebenzi. Ubuncinci unokuqiniseka ukuba wenza konke okusemandleni akho ukuzama ukuthintela izifo zentsholongwane kunye neebacteria ukuba zingasasazeki.
Esi sisicoci sesepha esingachukumisiyo sasenzelwa ukusetyenziswa kurhwebo. Nangona kunjalo, ungasifaka le-dispenser ekhayeni lakho nayo. Njengoko ufuna usapho lwakho lukhuseleke kwaye lube sempilweni, ngesixhobo sokuhambisa isepha esingenakuchukunyiswa, ungakwenza lula oku. Nokuba uyigcwalisa ngesepha, okanye ngesibulala-ntsholongwane, ngokwamasiko akho. Njengoko le isepha yokucoca isepha engachukumisi inoyilo oluncinci, inokulingana nakweyiphi ikhitshi okanye igumbi lokuhlambela. Inika nokuthinta okuhle kwetekhnoloji yale mihla ekhitshini lakho okanye kwigumbi lokuhlambela ngaphandle kokufumana indawo eninzi.
Yila isixhobo sokuhambisa isepha
Isaserali engenasichukumisi yokuhambisa isepha yeWOWOW iluncedo kwaye icocekile njengoko unako ukuhlamba izandla zakho ngokuzenzekelayo ngaphandle kokuchukumisa nantoni na xa usebenzisa isepha okanye isandla sanitizer. Ngaphandle koko, le diski yokucoca ingasebenzi ngaphandle kwesixhobo esizenzekelayo inesidanga kunye noyilo olucekeceke. Ayigcini nje ngokugcina indawo, kodwa ikwinto entle yoyilo kuzo zombini iindawo zikawonkewonke njengekhaya lakho. Le ntsalela yesepha engachukumisi ngokuqinisekileyo iya kuba negalelo kumfanekiso wenkampani yakho njengenkampani yanamhlanje ekhathalela abathengi bayo, abasebenzi kunye nempilo.
Ngaphandle koyilo, i-WOWOW ikwacinga kakuhle malunga nokusebenza kwale nkozi yokuhambisa isepha. Ukulula kokusebenzisa ngokuqinisekileyo lolona ncedo luphambili lwesixhobo sokusebenza esisebenzayo. Kodwa kwizicoci zesepha ezingachukumisi umceli mngeni omkhulu kukubonelela ngesixa esifanelekileyo samanzi, ngaphandle kokuchitheka okungcolisayo. I-valve yokuhambisa yokuhambisa isepha ye-WOWOW engachukumisi ilawula inani lamanzi kwaye ithintele ukuntywila. Ke ngoko isicaka sokusasaza esingashukumiyo seWOWOW sinceda ukuba ungathinteli iintsholongwane ukuba zisasazeke kwintuthuzelo yabathengi ephezulu, nangaphandle kwenkunkuma.
Umatshini wokuhambisa isepha engachukumisi yomsebenzisi ngaphandle kwesichukumisi I-WOWOW engachukumisi ifaka uyilo olumbumbane, kuba lunokuxhotyiswa ngebhetri okanye ngamandla eDC. Oku kwenza ukuba lesetyenzisi yesepha engenakuchukunyiswa isebenziseke lula kwaye inokufakelwa ngokukhawuleza, nangona ingenalo udonga ekufutshane. Umane ugalela umngxunya omncinci kwintaba yedesika, kwaye ungasifaka isisicoci sesepha esingachukumisi ngaphandle kwengxaki. Ngaphantsi kwekhitshi lokuhlambela kwegumbi lokuhlambela ungasusa izinto ezilulwelo ngokulula, kwaye azibonakali nakubani na. Ngale ndlela i-esthetics ayenzakaliswa nangayiphi na indlela kwaye unokunikezela ngenkonzo epheleleyo ngalomatshini wokucoca isepha ngaphandle kokuchukumisa.
Njengazo zonke iimveliso zayo, I-WOWOW isebenzisa ubuchwepheshe obufanelekileyo obuphakathiyo ukubonelela ngemveliso ekumgangatho ophezulu. Kwaye ngenxa yokuthengwa kwayo ngokuchanekileyo kunye neenkqubo zokuvelisa ezizenzekelayo, I-WOWOW inokunika le disenser yokuhambisa isepha ngexabiso elifanelekileyo. Ku-WOWOW siyazingcwaba ngeemveliso zethu kunye nomgangatho osinike abathengi bethu abavela kwihlabathi liphela. Ke ngoko sinethemba lokukubonelela ngesiqinisekiso seminyaka emihlanu. Ukuba into yakho yokucoca ngesepha engachukumisi ibingayi kwenza ngendlela obungayilindela ukuba yenziwe, siya kuyibuyisela endaweni yokucoca isepha yakho ngaphandle kwengxaki.
Ngaphandle koko, i-WOWOW ibonelela ngesiqinisekiso sokubuya kwemali kwiintsuku ezingama-90. Ukuba awungekhe uyithande le ntsalela yokucoca isepha ngesizathu esithile, siya kukubuyisela ngaphandle kwemibuzo ebuzwe. Ngale ndlela unokwamkela itekhnoloji yenzwa ye-infrared sensor ukuphepha usulelo lwesibini lomnqamlezo ngaphandle kwengozi konke konke. Ingaba ulunde ntoni?
Nceda unxibelelane nathi xa ufuna uku-odola isixa esiphezulu sesicoci sesepha esingachukumisi ukuba sikunikeze isaphulelo.
Izibonelelo zesicoci sesepha esingachukumisi ngocoselelo:
• Itekhnoloji ye-infrared ye-high-tech
• Unokuzaliswa ngesepha, isibulala-ntsholongwane okanye isicoci sezandla
• Uyilo lwale mihla
• Ukwenza okuphezulu
• Usetyenziselwa urhwebo kunye nasekhaya
Q&A yoMatshini wokuhambisa isepha ngokuzenzekelayo:
(1) Q: Ndifuna ukuqinisekisa ukuba ayifuni iibhetri.
A: Unokukhetha ukunikezelwa kwamandla e-AC, akukho mfuneko yeebhetri.
(2) Q: Oku kunxibelelana njani nesepha "yomthombo" okanye ibhotile yesepha? Ngaba inokudityaniswa nebhotile enkulu ehleli phantsi kwikhabhathi?
A: Ibhotile eqhelekileyo yi-1L, exhonywe ngokuthe ngqo phantsi kwebhokisi yolawulo. sineebhotile ze-5L, kodwa ukuhanjiswa e-United States kuya kubiza kakhulu. Ungathenga iibhotile e-USA ngokwemfuneko yakho. Sifuna kuphela ukwandisa umbhobho phakathi kwebhotile kunye nebhokisi yolawulo. Zombini i-5L kunye ne-10L zinokusetyenziswa, kwaye zinokubekwa emhlabeni.
(3) Q: Ufuna mngakanani umngxunya? Sele ndinomngxunya wokuhambisa isixhobo sesepha kwikhawuntara yam.
A: Ubungakanani umngxuma: 25-35mm.
I-SKU: Isicoci sesepha esingachukumisi-2 iindidi: Ukuhlamba igumbi lokuhlambela, Izipompo zeBlue Bath tags: I-Deck Ephakamileyo, Isenzi sentshukumo, Isixhobo esingashukumiyo sentsimbi
Brass, Chrome, ulwelo ukutshiza
I-2 kg = 4.4092 lb = 70.5479 oz
I-Matt Black Tall Basin Mixer Tap
Amanqwanqwa amade eVessel Sinks White Square
WOWOW I-oyile ehlikiweyo iBronze Igumbi lokuhlambela lokuSinki 2 -...